En direct de Madagascar | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Filatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA : fahavalom-pirenena koa izay mbola be kajy politika (+vidéos)
Fihetsika manokana no nentin’ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana naneho hevitra tamin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena androany. Teo am-pitsanganana no nampandrenesan’izy ireo ny rehetra fa tsy hitondra fitoniana ny fanakanana ny filatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA satria tsy Antananarivo irery akory no mitaky izany fa ny ankamaroan’ny Malagasy mahatsapa ny lalan-dratsy nitondran’ny FATE ny Firenena tao anatin’ny telo taona.
Nampahatsiahivin’i Leriva Manahirana ny SADC rahateo fa isan’ny tena mampiverimberina ny krizy eto Madagasikara ny fifanilihana ka ny fisoroahana izany no tokony atao laharam-pahamehana. Ny ahiahy koa tsy ihavanana ka notsorin’ny depioten’i Brickaville fa tokony hiala dieny izao izay rehetra mbola mieritreritra fa hijoro ho kandida amin’ny anaran’ny Filoha RAVALOMANANA raha sanatria tsy afaka milatsaka izy. Efa tokam-po ny mpandala ny ara-dalàna ka tsy te-hierika mpamadika tolona intsony.
Fandemen-tsaina no betsaka amin’ny zavatra ambaran’ny mpitarika ny mpanongam-panajakana. Ny fisehoana manaparitaka vaovao tsy marina alohan’ny SADC mpanelanelana rahateo dia fandikana ny fitsipi-dalao nifanarahan’ny rehetra. Ny tanjona dia ny hahafahan’ny FATE mampiroaroa saina ny mpomba ny Filoha RAVALOMANANA na dia tsy marina aza ny fanambarana atao. Raha ny zavatra niainan’ny « légaliste » tao anatin’ny telo taona anefa dia tsy tokony hadairan’ny lainga marivo tototra intsony ny vahoaka. Fotoana fiomanana amin’ny dingana manaraka mety hatrehina izao fa tsy fifamendrofendroana amin’ny lahatenin’ny mpanongam-panjakana velively.
Tsy miova … ary tsy hiova : ny ara-dalàna hatrany (+vidéos)
Miharihary ankehitriny fa Rajoelina no voalohany tsy manaiky ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara ary niaiky izany mihitsy izy. Hatramin’ny taona 2009 manko dia nafenina aorian’ny raharaham-pitsarana sandoka ny fanakanana ny Filoha tsy hody saingy rehefa « may Ambondrona » dia nafatotry ny laingany ny mpanongam-panjakana. Efa zatra mivadibadi-dela loatra manko ka zary fehezin’ny teny avoakany. Amin’i tgv manko dia hadisoana ny « tsy miova » amin’ny foto-kevitra ijoroana ary nanomezany tsiny ny Filoha RAVALOMANANA izany tao anatin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataony teo am-pahatongavana avy atsy Seychelles.
Izy rahateo mahavita mitsipaka ny sonia nataony rehefa hiaro ny tombontsoany manokana. Ny finiavana hanilika olom-pirenena tsy hisitraka ny zo ahafahany milatsaka ho fidiana sy mandray anjara amin’ny fitantanana ny Fireneny dia tsy hitarika fitoniana velively. Toa teren’ny sasany hizotra mankany amin’ny fanakanana ny filatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA manko ankehitriny ny vahaolana amin’ny krizy. Inoana anefa fa tsy ho sarotra amin’ny SADC ny handamina izany satria porofon’ny fitiavan’ny Malagasy ny Filoha RAVALOMANANA ny hamaroan’ny olona tonga raha vantany vao mikasa hiverina an-tanindrazana ny tenany. Mazava hoazy fa hiteraka krizy vaovao indray ny fanitsahana ny safidin’ireo maro an’isa mbola mankato azy.
Raha ny tena izy dia Rajoelina mihisty no tsy afaka milatsaka satria nanongam-panjakana saingy efa fandeferana lehibe ho an’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny vahoaka Malagasy ny nanaiky hifampiresaka taminy ka niafara tamin’ny fandaniana ho lalàna ny fifanarahana mametraka azy ho filohan’ny tetezamita. Raha zohiana anefa ny fitondrany tao anatin’ny telo taona dia ny manao gaboraraka ny harem-pirenena sy ny manageja ny mpiray tanindrazana no tena hainy. Efa-taona latsaka aty aoriana dia mbola te-handidy dia homana amin’ny raharaham-pirenena ny tenany ka ny foto-kevitra nitoloman’ny mpandala ny ara-dalàna tao anatin’ny telo taona mihitsy no hitsahiny sy viravirainy.
FOLM : « atsaharo ny fanaovana sorona ny vahoaka » (+vidéos)
Amin’izao ankatokin’ny fahatsiarovana ny andron’ny 10 Aogositra izao dia nanambara am-pahibemaso ny fikatsahana tolona tsy mandatsa-drà ny avy amin’ny vondron’ny mpanohitra na « Front des Opposants pour la Libération de Madagascar ». Ankoatra izay dia miara-dalana tanteraka amin’ny hetsiky ny mpiasam-panjakana arindran’ny « cellule de crise interministérielle » izy ireo noho ny fahatsapana ny tsy fisian’ny fitondrana tsara tantana eto amintsika.
Ny mpiasam-panjakana, rehefa niantso fanambarana hery, dia efa nifanantona tamin’ireo ben’ny tanàna izay hany olom-boafidy sisa tafajoro ary nangataka ny fijoroan’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenena avy hatrany mba hanamarina ireo fandikan-dalàna fototra nataon’ny mpitondra hatramin’ny 2009 no mankaty. Izany no natao, araka ny fanazavana, dia ho fanajana ny an-tanatohatra rehetra amin’ny fitakiana mba tsy handatsahan-drà intsony amin’ny tolona izay atao. Noho ireo antony roa ireo indrindra, araka ny fanazavan’ny mpandrindra ny FOLM no nahatonga azy ireo nanapa-kevitra hiara-dalana amin’ny mpiasam-panjakana eo ambany fandrindran’ny « cellule de crise ».
Tokony atomboka izao ny fifampihavanana
Tsy azo atao amboletra ny fifidianana na dia isan’ny fototra demokratika aza araka ny fomba fijerin’ny vondron’ny mpanohitra. Raha raisina ho azo tanterahina ny tetiandro nomen’ny CENI-T dia tokony hatomboka izao sahady ny dingana amin’ny fifampihavanana ary tsy maintsy apetraka ny fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy mba ho tena tontolo mandry fahalemana no iatrehana ny fifidianana. Mampametra-panontaniana ny FOLM anefa ny mety hahatanterahan’izany satria Ramatoa Lalao RAVALOMANANA izao ohatra dia noroahina toa fahavalo na dia efa tafiditra teto Madagasikara aza.
Krizy politika : mila fakafakana ny vaovao mivoaka (+vidéo)
Ao anatin’ny fotoana mampikorontana ny saim-bahoaka vokatry ny krizy toa izao no mora andairan’ny fanakorontanana amin’ny alalan’ny fafy lainga ny olom-pirenena. Mizotra mankany lalandava ny paikadin’ny mpanjanaka mba hanamafisany orina ny zarazarao anjakany amin’ny Firenena iray indrindra raha zanatany Frantsay toa antsika. Amin’izao fotoana izao indrindra no anamarihana vaovao isan-karazany izay hita sahady fa tsy marim-pototra akory ary toa lahantsoratra vita nozaraina amin’ireo gazety manohana ny FATE.
Manoloana ny toe-javatra toa izany dia tsara lavitra aloha ny tony tsara mba hanana maso mandinika. Mety kokoa raha halalinina tsara ny mombamomba ilay gazety mamoaka ny vaovao sy ny mety ho fahamarinana aparitany. Anjaran’ny tsirairay aveo no mitsara ilay vaovao amin’ny fahitany azy ka tsy voatery hiroaroa saina amin’ny topimaso fotsiny. Ny tanjona, izay mety ho hany soa azo raisina amin’izao krizy izao, dia ny fahaizana mamakafaka ny tranga rehetra azahoana lesona politika mba tsy hamaky takotra ka voan’ny fakam-panahy hanongana ny fanjakana ara-dalàna indray any aoriana.
TMR sy GTT : mpiara-mitolona 1200 no nahazo fanampiana (+vidéo)
Fiaraha-miasan’ny Tanoran’i Marc RAVALOMANANA sy ny mpiray tanindrazana mila ravin’ahitra any ivelany, Gasy Tia Tanindrazana (GTT) no nahafahana nifampizara fanampiana teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany. Vary roa kilao isan’olona no nozaraina androany ho fitsinjovana ny fahasahiranan’ny mpiara-mitolona. Tsy natao hahavita taona tsy akory fa mba hanamaivanana izay vita amin’ny andro sarotra toa izao. Vary roa taonina sy sasany no nentina nanatanterahana izany.
Sary hetsika TMR
Araka ny fahitan’ny mpandrindra ny TMR dia ahitana taratra ny fahasahiranan’ny mpiray tanindrazana satria na dia efa misy aza ny lamina dia mbola maro no nanao fangatahana manokana hisitrahana izany. Mbola manaporofo izany fa mila ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA ny famerenana ny fiainana amin’ny laoniny. Mihamafy hatrany izany fahasahiranan izany ary efa tsy lavitra intsony ny tena fahantrana. Araka ny fototry ny tolon’ny TMR dia mbola mitaky ny fahafahan’ny Filoha RAVALOMANANA mirotsaka ho fidiana hatrany izy ireo ary mbola namafisiny izany androany. Manantena ihany koa izy ireo fa mbola hisy ny malala-tanana afaka hanohy ny tolo-tanana hanamorana ny sosialin’ny mpiara-mitolona toa izao.
MFM : hanova famindra ho an’ny 40 taona manaraka (+vidéo)
Vonona hanarina ny fomba famindran’ny antoko ireo mpikatroka MFM mba hanapariahana kokoa ny foto-kevitra ijoroany. Raha ny fitsinjovana ny fahefan’ny madinika amin’ny alalan’ny fenitra teny ierana no nanainga ny nanaganana ity antoko ity tamin’ny taona 1972 dia tsapan’ny mpandrindra ny vondrona Antananarivo renivohitra fa mila fanovana ny tetikady hampitana izany amin’ny mpiara-belona. Tsy afaka mihanona fotsiny amin’ny valala bemandry intsony fa ny sokajy sosialy, toe-karena ary politika rehetra mihitsy no mila izarana izany.
Manomboka amin’izao hetsika fanokafana izao ary dia kasain’izy ireo sahady hisantarana ny fampahafantarana any amin’ny Faritra hampielezana ny fonjan-kevitry ny antoko. Andro faharoa nanokafana ny fankalazana ny faha-40 taona ny antoko androany ka famelabelarana narahina ady hevitra sy fampirantiana ny tantaram-piainan’ny MFM no natao tao amin’ny kianja mitafo Mahamasina. Fotoam-bavaka teny amin’ny lasapely miaramila teny Ampahibe kosa no nanokafana izany omaly zoma 03 aogositra 2012. Ny 27 desambra izao no ivon’ny fankalazana satria daty nitsanganan’ny antoko tamin’ny fomba ofisialy ny taona 1972.
Guy Maxime Ralaiseheno : « amin’ny talata ny fihaonana faharoa » (+vidéo)
Nambaran’i Guy Maxime Ralaiseheno teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany fa amin’ny talata 07 aogositra 2012 hoavy izao no hihaona atsy amin’ny nosy Seychelles indray ny Filoha RAVALOMANANA sy i Rajoelina. Nampitainy tamin’ny mpiara-mitolona ihany koa fa nisy ny fihaonan’ny delegasioan avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA tamin’ny iraka maharitry ny SADC eto Madagasikara omaly ary nanamafisana fa tsy misy ankoatra ny fampiharana manontolo ny tondro zotra no ahafahana mivoaka amin’ny krizy. Namasin’ny SADC ary fa tsy hivaona amin’izany ny fihaonan’ny roa tonta izay ho tanterahina amin’ny herinandro ambony io.
Kianjan'ny Finoana : mila fitoniana alohan’ny fifidianana (+vidéos)
Tsy mitsipaka ny tetiandrom-pifidianana navoakan’ny CENI-T ny eo amin’ny Kianjan’ny Finoana fa manantena kosa fa hanaraka hoazy ny fepetra rehetra ahafahana miatrika izany. Mbola manamafy hatrany izy ireo fa tsy azo eritreretina ny fahalalahana miatrika ny fifidianana rahatoa ka tsy tanteraka manontolo ireo paipaika mikasika ny fitoniana voasoritry ny tondro zotra. Hatreto aloha dia mikatso ny fametrahana izany noho ny tsy fisian’ny finiavana avy amin’ny mpitondra.
Rehefa nankatoavin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mantsy ny tetiandro navoakan’ny vaomiera mahalotena misahana ny fifidianana dia manantena ny Malagasy maro an’isa fa hijoro ho tsindry (pression) ho an’ny FATE ny mpanelanelana ahafahana manatanteraka fifidianana tsy manilika sy ankatoavin’ny rehetra.
Isan’ny mbola olan’ny vahoaka Malagasy ihany koa ary tena mampihorohoro ny rehetra mihitsy ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Maro no mandry tsy lavo loha noho ny firongatry ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo. Hany ka tsy afaka mamokatra araka ny tokony ho izy nefa ny fiainana miha-sarotra andro aman’alina. Na dia mihisatra tanteraka aza ny fandraisana andraikitra avy amin’ny fitondrana foibe dia misy ihany ny olom-boafidy teo aloha no manao ny asa fampandrian-tany miaraka amin’ireo mpitandro filaminana any amin’ny toerana misy azy. Ho an’Arivonimamo manokana ohatra dia efa herinandro izao no nanombohan’ny « opération » tany amin’ny distrika ka ny solombavam-bahoaka mihitsy no miara-mandrindra amin’ny zandary any an-toerana. Araka ny fanazavana nentin’ny depiote Rodin Rakotomanjato dia ho fitsinjovana ny tantsaha mpamokatra indrindra no anton’izao asa fampandrian-tany izao.